त्रियुगा नगरप्रमुख भन्छन्- उदयपुरमा तत्काल ‘स्वास्थ्य संकट’ घोषणा गरेर अस्पताल खोलियोस् – Health Post Nepal
त्रियुगा नगरप्रमुख भन्छन्- उदयपुरमा तत्काल ‘स्वास्थ्य संकट’ घोषणा गरेर अस्पताल खोलियोस्
२०७७ वैशाख ११ गते १०:१६
उदयपुरकाे त्रियुगा नगरपालिका–३ भुल्केमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। हालसम्म ३० जनामा कोरोना देखिएको छ, यसमध्ये २७ जनाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। थप तीनजनालाई नेपाली सेनाकाे स्वास्थ्य टाेलीले जाँच गर्दा फेला पारेकाे हाे।
त्रियुगा नगरपालिकामा ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मेयर बलदेव चौधरी बताउँछन्। उनले उदयपुरलाई तत्काल ‘स्वास्थ्य संकट’ घोषणा गरेर स्वास्थ्यकर्मीसहित विशेष अस्पताल बनाउन माग गरेका छन्। त्रियुगाको पछिल्लो अवस्थाबारे मेयर चौधरीसँग हेल्थपोस्टनेपालका लागि खिलानाथ ढकालले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
अहिले त्रियुगा नगरपालिका–३ भुल्के कोरोनाको हटस्पट छ, त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के हो?
अहिले त्यहाँको अवस्था निकै संवेदनशील बनेको छ। सुरुमा १६ जनाको परीक्षण गर्दा १२ लाई कोरोना देखियो। पछि चार थपिए। ६९ को परीक्षण गर्दा आठजनामा देखियो। अहिलेसम्म २७ जना पुष्टि भएको औपचारिक जानकारी छ। परीक्षण र देखिने क्रम जारी छ।
कोरोना भाइरस देखिए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन किनभने अहिलेसम्म कोरोना लागेका सबै निको भएर घर फर्केका छन्। तर, त्यसको उचित बन्दोबस्त यहाँ छैन। हामी सबैको स्वाब परीक्षण गर्छौं, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग कुरा भइरहेको छ। चाँडोभन्दा चाँडो एउटा क्याम्प खडा गरिदिएर अस्थायी अस्पताल बनाइदिनुस् भनेका छौं।
घरमै बसेर कोरोना जितिन्छ भनेर जनतालाई हौसला दिने काम गरेका छौं। मानिसहरू घरभित्रै राखेका छौं। जति परीक्षण भएको छ, मुस्लिम समुदाय वरिपरिको मात्र देखिएको छ। स्थानीय तहले के–के सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ तयार छौं। निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा तयारी अवस्थामा छ। केही भइहाले तुरून्त बिरामी ल्याएर अस्पतालसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरेका छौं। विराटनगर, धरानसम्म पठाउन कुनै समस्या छैन।
अब ती १६ संक्रमित फत्तेपुरबाट चौदण्डी नगरपालिकाका विभिन्न स्थान घुमेका छन्। त्रियुगा आएर पनि १, २, ५, ६, वडामा घुमेका छन्। ती सबै वडा जोखिममा पर्ने नै भए।
संक्रमित क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ?
कोरोना देखिएको समुदाय सिल गरिएको छ। कसैलाई भित्र–बाहिर निस्किन दिइएको छैन। त्यहाँ अत्यावश्यक सेवा-सुविधा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यो वडा कति जनसंख्या भएको ठाउँ हो र कुन–कुन समुदायको बसोबास छ?
चारवटा टोल विकास संस्था छन्। ५३ घर मुस्लिम छन्। थारू समुदाय ४० घर छ। सवा २ सय अन्य समुदायका छन्। त्यो क्षेत्रका सबै घरलाई परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ। अहिले हामीले करिब ३ सयलाई परीक्षण गरिसकेका छौं। बाँकीलाई चाँडो परीक्षण गर्न भनेर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं। बुधबारमात्र २ सय ५ जनाको परीक्षण गर्ने तयारी गरेका थियौं। सामान र स्वास्थ्यकर्मी नभएका कारण हामीले बाँकी परीक्षण गर्न सकेनौं।
उदयपुरमा करिब २ हजार १ सयजनाको तुरून्तै परीक्षण गर्न आवश्यक छ। सुररुमा देखिएका १६ जना सुन्दरपुर, सिवाही, चौदण्डी, जोगिदह, मोतिहारी, जलजले हुँदै भुल्के आएका हुनाले परीक्षण गर्नैपर्छ।
मुस्लिम समुदायसँग उनीहरूको भेटघाट भएको छ। ती समुदायका मान्छे तरकारी बेच्न बजार जाने, ११ नम्बर वडा, १२, १० नम्बर वडा जाने गरेका कारण ती वरिपरिका मान्छेको परीक्षण गर्न जरुरी छ।
परीक्षण गर्न अहिले कहाँ पठाइरहनुभएकाे छ?
यहाँ स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। कि प्रदेश कि संघीय सरकारबाट आएका स्वास्थ्यकर्मीले परीक्षण गरिरहेका छन्। परीक्षण गर्न कि धरान, कि विराटनगर कि काठमाडौं पठाउनुपर्ने अवस्था छ। यहाँ कुनै उपकरण छैनन्, त्यसैले यहाँ विशेष टोली खटाएर काम थाल्नुपर्छ भनेर माग गरिएको छ।
यहीँकाे जिल्ला अस्पतालमा उपचारको कस्तो व्यवस्था छ?
यहाँ एउटामात्र जिल्ला अस्पताल छ। तर यो कोरोना परीक्षण र उपचारको अस्पताल हैन। एउटा कोही त्यस्तो बिरामी भयो भने यहाँ अरू उपचार प्रभावित हुन्छ। केही आइसोलेसन बेड छन्, तर आइसियु, भेन्टिलेटर बेड छैन। यहाँका तेह्र जना डाक्टर दरबन्दीमध्ये एकमात्र छन्। चारजना करारमा डाक्टर छन्। यहाँ स्वास्थ्यकर्मी पनि धेरै छैनन्।
अहिले तुरून्तै अस्पताल खडा गर्नुपर्ने हो? विराटनगर, धरान पठाउन असजिलो भएको हो?
यहाँ ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित देखिने सम्भावना छ। विराटनगर–धरान पठाएर साध्य नहुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण छुट्टै अस्पताल खडा गरिहालौं भनेका हौं। यस्तो अवस्थामा खडा नगरे कहिले गर्ने? नेपालमा सबैभन्दा बढी संक्रमित यहाँ देखिएका छन्, धेरैको परीक्षण गर्न बाँकी छ।
सबै स्रोतसाधन लिएर यहाँ केन्द्रित हुनुपर्ने हो। यस्तो बेलामा संघीय, प्रदेश सरकारका सबै अधिकारीहरू स्थलगत भिजिट गर्न आउनुपर्ने हो। विशेष अस्पताल खडा गर्न खै उच्चस्तरीय समितिका पदाधिकारीको भूमिका?
त्रियुगामा कोरोना महामारी देखिँदा पनि संघीय र प्रदेश सरकारबाट चासो-चिन्ता नदेखिएको हो?
उहाँहरूलाई सबै जानकारी छ। के कारणले उहाँहरूलाई यहाँ आएर काम थाल्न अप्ठेरो भएको हो बुझ्न सकेको छैन। यहाँको अवस्था थाहा हुँदाहुँदै चासो नदेखाइएकाले बाध्य भएर मैले प्रदेश र संघीय सरकारलाई बुधबार ध्यानाकर्षण गराएको छु।
अरू समस्या के छन्?
अब ती १६ जना संक्रमित फत्तेपुरबाट चौदण्डी नगरपालिकाका विभिन्न स्थान घुमेका छन्। त्रियुगा आएर पनि १, २, ५, ६, वडामा घुमेका छन्। ती सबै वडा जोखिममा पर्ने नै भए।
अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको मान्छे बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन्। खेतीपाती गर्ने किसान घरबाहिर निस्किन पाएका छैनन्। कृषि उपजको क्षति भएको छ। औषधी उपचारका लागि कहीँ जान पाएका छैनन्। स्थानीय तहले सकेसम्म औषधी घरमा पुर्‍याउने गरेको त छ, तर पर्याप्त छैन। उयपुरका नागरिक जोगाउन ‘विशेष प्याकेज’ नै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य संकट घोषणा गरेर स्वास्थ्य सुविधासहितको ‘विशेष प्याकेज’ ल्याइयोस्। यो समस्या उदयपुरको मात्र हैन, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, सबै नागरिकको समस्या हो। त्यसकारण उदयपुरलाई अहिले जोगाउन जरुरी छ।